Juventus oo baddelka Cristiano Ronaldo u aragta xiddig ay naadiga Barcelona dooneyso xagaagan – Gool FM
Juventus oo baddelka Cristiano Ronaldo u aragta xiddig ay naadiga Barcelona dooneyso xagaagan
(Turin) 07 Juun 2021. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa isu diyaarineysa lasoo saxiixashada xiddig baddel u noqda Cristiano Ronaldo kaasoo xagaagan laga yaabo inuu ka dhaqaaqo Turin.
Juve ayaa haatan qorshaha ku dartay Memphis Depay oo si aad ah loola xiriirinayo inuu u dhaqaaqo kooxda Barcelona xagaagan isagoo bilaash kaga tagaya kooxda Lyon maadaama uu dhici doono qandaraaskiisa dhammaadka bishan June.
Wargeyska Corriere dello Sport ayaa baahiyay inay Bianconeri u dhaqaaqeyso soo xero gelinta laacibka reer Netherlands kaliya haddii uu kooxda ka tago Ronaldo kaasoo ku biiri kara xagaagan kooxo ay ka mid yihiin Manchester United iyo Paris Saint-Germain.
Si kastaba ha ahaatee, Barca ayaa baadi goob ugu jirta saxiixa Depay tan iyo xagaagii hore inkastoo aysan jirin wada-xaajood rasmi ah oo u dhexeeya labada dhinac, sidaas darteed, Juventus ayaa heysata fursad ay laacibkan ugu qancin karto ku biirista garoonka Allianz Stadium.
Dhinaca kale, wargeyska Taliyaaniga kasoo baxa waxa uu akhbaartiisa ku daray inay kooxda Marwada Duqda ah dooneyso inay isla ekeysiiso dhaqaalaheeda isla markaasna ay lasoo saxiixato kaliya xiddigo bilaash ah ama qiimo hoose lagu heli karo.
RASMI: Tababare Gareth Southgate oo xulka England kusoo daray xiddiga baddelaya Trent Alexander-Arnold